Tombony ho an'ny fakan-tsarimihetsika vita amin'ny vatana amin'ny hopitaly - Vahaolana OMG
Ny tombony azo amin'ny fakan-tsary amin'ny vatana ao amin'ny hopitaly
Fakan-tsary mipetaka amin'ny vatana any amin'ny Toeram-pitsaboana
Ny siansa sy ny teknolojia dia nanarona tanteraka an'izao tontolo izao tato anatin'ny taona vitsivitsy. Azontsika atao ny mahita zava-baovao maro vaovao izay vokarina isan'andro mba hahasoa sy hanohana anay. Ny olona rehetra dia voahodidin'ny famoronana teknolojia ireo. Ny sedra sy ny fanaraha-maso dia fanamby lehibe iray isan'andro. Nahita vahaolana maromaro izahay ho an'ny olan'ny fiarovana. Iray amin'ireo entana tena ilaina indrindra amin'izao fotoana izao ny fakan-tsary Body Worn.
Ny Kamera Body Worn dia fakan-tsary manokana izay manome fanohanana sy backup ho an'ilay olona mampiasa azy. Izany dia mipetaka amin'ny vatan'ilay mpampiasa ary mirakitra ireo zavatra hitan'ny mpampiasa. Ny fakantsary vita amin'ny vatana no misafidy ny fironana ambony indrindra isan'andro. Satria tena nahomby sy nahomby tokoa izy ireo.
Ny fakantsary raikitra niakanjo fototra dia nampiasain'ny departemantan'ny polisy hanampy ireo mpitandro filaminana amin'ny fanadihadiana, famotorana ary fanaraha-maso. Fa ankehitriny, efa nanomboka nampiasaina tamin'ny sahan'ny hafa koa izy ireo. Ny ohatra tsara indrindra ampiasain'izy ireo dia ao amin'ny tobim-pitsaboana.
Fampiasa amin'ny fakantsary fiasana vatana amin'ny toeram-pitsaboana:
Nanomboka nampiasa fakantsary maotina misy vatana ho an'ny tanjona maro ny trano fitsaboana. Nanomboka taona vitsy izao io fironana io. Ny ankamaroan'ny fakantsary dia ampiasaina hanara-maso sy fandraisam-peo eo amin'ny fidirana amin'ireny fotodrafitrasa ireny. Na eo aza izany tanjona izany, ireo fakantsary ireo dia misy fampiharana hafa maro. Ny fampiasana lehibe amin'ireto fakantsary ireto dia ny fanaraha-maso ny fihetsiky ny marary manana fahasembanana ara-tsaina. Ny fakantsary raikitra amin'ny vatana dia mihena koa ny fitondran-tena basian'ny mpiasan'ny tobim-pahasalamana amin'ny marary sy ny mpanatrika. Niteraka fihenam-bidy lehibe nitranga tany amin'ny hopitaly sy toeram-pitsaboana izany. Ny fakan-tsary vita amin'ny vatana ihany koa dia ampiasaina amin'ny mpitsabo mba hisedrana ny fahaizany ary hanondro ny fahadisoany. Amin'ny ankapobeny dia afaka manana rindranasa fakantsary maro be isika, raha ny hevitray dia tsy tokony ampiasaina amin'ny tobim-pitsaboana izy io satria manelingelina ny fiainana manokan'ny mpiasan'ny hopitaly ary koa ireo marary sy ireo akaiky azy. Andao hojerentsika ny momba ireo lafiny rehetra ireo ary ho tonga vokatra tsara.
Andeha hojerentsika ny fampiasana ny fakan-tsary mifoka vatana amin'ny toeram-pitsaboana.
Fiarovana sy fanaraha-maso:
Ny fiarovana dia iray amin'ireo fanamby sarotra indrindra tsy maintsy atrehin'ny olona ankehitriny. Noho izany dia mampiasa karazana fitaovana fiarovana azo antoka izy ireo amin'ity tanjona ity. Raha miresaka momba ny fakantsary maotina amin'ny vatana isika, dia andeha hojerentsika ny zava-bitan'izy ireo ao amin'ny toeram-pitsaboana. Nanomboka ny fakan-tsary amin'ny fakan-jaza ho an'ny fiarovana sy ny fanaraha-maso ny toeram-pitsaboana. Matetika ireo fakantsary ireo dia miraikitra amin'ny vatan'ireo mpiambina mpiambina izay mitsangana eo amin'ny fidirana amin'ny vavahady lehibe. Tokony hieritreritra ianao fa maninona no tsy nampiasa fakantsary CCTV noho io tanjona io. Fa raha mahita isika, ny fampiasana fakan-tsary misy vatana dia manatanteraka tanjona roa ary manana tombony betsaka kokoa.
Amin'ny voalohany fakan-tsary dia afaka manome fanaraha-maso feno sy firaketana ny olona rehetra mandalo ny fidirana. Manana teboka lehibe kokoa noho ny hetsika malalaka io. Noho izany dia afaka mandrakotra faritra lehibe kokoa noho ny fandraketana izany.
Faharoa, handrakitra ny fihetsik'ireo mpiambina manana cameras mipetaka amin'ny vatany izy ireo. Ary vokatr'izany dia maneho fihetsika tsara amin'ny vahoaka izy ireo. Hihena ny isan'ireo tranganà herisetra mahery vaika. Noho izany, azontsika jerena mazava fa mahomby kokoa ireo fakantsary raikitra amin'ny vatana.
Fanaraha-maso ny herisetra:
Ny herisetra dia olana lehibe tamin'ny toerana fivoriam-bahoaka. Toy izany koa ny tobim-pahasalamana. Ny trangan'ny herisetra dia mety hanimba ny famerenan'ny trano misy azy ary afaka manelingelina ny marary sy ny mpanatrika hafa. Tsy afaka manantena ny hopitaly na mpiasan'ny mpitandro ny filaminana ihany izahay hampiseho herisetra amin'ny vahoaka. Saingy, betsaka ny tranga izay ny herisetra tafahoatra dia nateraky ny marary izay niteraka olana ho an'ny hopitaly ary koa, fanelingelenana ho an'ny marary. Noho izany, dia mampiasa fakantsary vita amin'ny vatana izahay. Ireo fakantsary ireto dia ampiasaina hanaraha-maso ny fihetsiky ny mpiasa manoloana ireo marary. Miaraka amin'ireo fakantsary mipetaka amin'ny vatany, ireo mpiasa dia hanandrana ny zava-drehetra atao mba hampisehoana ny fihetsika malefaka indrindra. Amin'izany fotoana izany ihany, raha misy marary na mpanatrika mampiseho herisetra, dia afaka milaza azy ireo ny mpiasa fa voarakitra an-tsoratra izy ireo. Amin'izany fomba izany, ny fakan-tsary mandeha amin'ny vatana dia afaka manampy be dia be amin'ny fifehezana herisetra amin'ny tobim-pitsaboana.
Fanaraha-maso sy fanofanana mpitsabo:
Ny fakan-tsary vita amin'ny vatana dia misy fampiasana hafa mahomby amin'ny tobim-pitsaboana. Ampiasaina izy ireo hanara-maso ny fahaizan'ny dokotera tanora sy ny mpitsabo amin'ny alalàn'ny zokiolona. Ny mpitsabo mpanampy dia manome taranja manokana ho an'ny asany. Adidiny ny mikarakara ireo marariny, manome azy ireo fanafody sy hikarakarana ny zavatra ilainy. Izy ireo koa dia manampy ny mpitsabo amin'ny fikarakarana ny marary. Tena ilaina ny fitondran-tenan'ny mpitsabo. Efa niresaka sahady izahay fa ny fakantsary raikitra eo amin'ny vatana no ampiasaina hanaraha-maso ny fihetsiny. Saingy amin'ny fotoana iray hafa, dia azo ampiasaina hanaraha-maso ny fahaizany.
Misy dokotera zokiolona iray na roa ao amin'ny trano iray izay mitarika ekipa mpitsabo zandriny. Afaka manara-maso mora foana ny juniors izy ireo ary afaka manondro ny fisian'izy ireo. Izany dia manome azy ireo tombony hampianatra mora foana ny junioriny.
Tokony alefa any amin'ireo trano fitsaboana?
Ny teknolojia fakantsary fitafiam-batana amin'ny tontolo fikarakarana ara-pahasalamana dia ahiana lehibe amin'ny fiandrasana ny fiainana manokan'ny marary sy ny mpitsidika. Raha ny hevitro dia tsy maintsy ferana ho an'ny mpiambina sy ireo mpitandro ny filaminana izay tonga any amin'ny tobin'ny hopitaly intsony ny fampiasana ireny fakantsary fampiakanana ireny. Misy ny iharam-boina sy ny dinidinika vavolombelona izay matetika tarihin'ny tompon'andraikitra ara-pahasalamana ataon'ireo tompon'andraikitra amin'ny fampiharana ny lalàna. Maninona no ataonay ny fakantsary ampiasain'ny polisy sy ny mpitandro ny filaminana? Andao hojerentsika ny antony lehibe amin'izany:
Fahadisoana lehibe amin'ny fakantsary fatin'antoka amin'ny fantsom-pahasalamana ara-pahasalamana:
Ny fakan-tsary vita amin'ny vatana dia manana tombony betsaka amin'ny alàlan'ny fampiasana azy ireo amin'ny tobim-pitsaboana saingy amin'ny fotoana iray, misy ny fatiantoka lehibe izay manapotika ny zavatra tsara rehetra ataon'ny fakan-tsary. Io olana io dia nyNy tsiambaratelon'ny marary.
Ny tobim-pahasalamana iray dia feno ny ankamaroan'ny olona. Amin'ity tranga ity, maro ny tsy maniry ny hisian'izy ireo manokana. Saingy tsy mamela azy ireo hanao izany ny isan'ny fakantsary mendrika. Miaraka amin'ny ankamaroan'ny mpikambana ao amin'ny mpiasa mampiasa fakantsary maotina amin'ny vatana dia lasa sarotra be amin'ny olona mihitsy ny mamonjy ny tenany. Ary tsy manana lalàna sy lalàna manokana izahay amin'izao fotoana izao izay manohana ny fampiasana fakantsary raisina hanakorontana ny fiainana manokan'ny olona. Ny tena zava-dehibe dia misy marary marobe, izay manana toe-tsaina faran'izay ratsy. Ny mpiasa dia tsy afaka mampiasa fakantsary amin'ny fampianarana na fanaraha-maso momba ny fitondran-tena raha manimba ny fiainana manokan'ny olona. Io dia lasa karazana hetsika tsy ara-dalàna izay manimba ny famoahana ny tobim-pahasalamana ary mahatonga ny mpanatrika sy ny marary tsy faly izay zavatra ratsy tokoa. Noho izany, nahoana isika no mila karazana fitaovana toy izany manimba ny fampiasana ankoatra ny manampy azy io? Ity zavatra ity dia hitarika ho amin'ny fianjeran'ny fakan-tsary mitazona vatana amin'ny tobim-pitsaboana.
Ahoana no hamahana izany olana?
Tsy manaraka ny andrasan'ireo marary azy ny tobim-pahasalamana ankehitriny. Izany dia satria ny fakan'ny fakantsary raikitra amin'ny vatana dia manimba ny tobim-pitsaboana mivantana amin'ny alàlan'ny fanelingelenana ny fiainana manokan'ny mpanatrika sy ny marary. Afaka miatrika fomba hamahana an'ity olana ity ve isika?
Ny tena olanay manokana dia ny fiainana manokana eto, izay hanelingelina ny fandraisam-peo azy ao anaty fakantsary raha tsy te ho ao anatiny. Afaka manana vahaolana. Tsy maintsy mihena ny isan'ireo fakan-tsary miakanjo amin'ny vatana. Raha jerena ny fepetra, ny mpiasa dia tsy tokony havela mampiasa fakantsary vita amin'ny vatana ao amin'ilay trano. Tsy maintsy avela miasa ho an'ny mpiambina izay mijanona eo amin'ny fidirana amin'ny trano ihany. Vokatr'izany, vitsy ny fakan-tsary dia azo ialana manala ny antony manelingelina ny fiainana manokana.
Ary koa, tsy maintsy misy ekipa mpikambana manokana avy amin'ny zokiolona izay tsy maintsy tompon'andraikitra amin'ny firaketana an-tsary rehetra. Tsy maintsy tazonina ao an-tranony ireo rakitsoratra ary tokony harenany. Amin'ity fomba ity, ho azo antoka ny firaketana an-tsoratra ary hanamaivana ny mpitsidika sy ny marary izany.
Tsy maintsy misy ny lalàna sy ny lalàna sasany izay manome vahaolana mahay mandanjalanja mba hifaneken'ny roa tonta. Avy eo dia samy hanaraka ny fitsipiny ny roa tonta. Hanokatra ny fampiasana fakan-tsary vita amin'ny vatana amin'ny fotony ary amin'ny fotoana sasany dia tsy hanelingelina ny fiainana manokan'ny marary izany.
Ny tombony azo amin'ny fakan-tsary amin'ny vatana ao amin'ny hopitaly no farany niova: Desambra 4th, 2019 by Admin